ရွှေဝန်းရတနာ: ဘဝအမောတွေပြေစေဘို့ အားလုံးဘဲရီ(ရည်)မောကြပါစို့...
ရည်းစာပစ်သွားလို သိပ်စိတ်ညစ်နေရှာတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ခုလိုနှစ်သိမ့်ခဲပါတယ်။
ကံကောင်းတာပေါ့၊လက်ထပ်ပြီးမှ ကွဲသွားရင် ပိုဆိုးမှာမဟုတ်လား"
" ငါတော့သူ့ကို ဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံး နည်းနည်းမှမေ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာ"
"ဒါကတော့မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ပါကွာ၊လက်တွေ့ကျတော့ မကြာခင်မှာဘဲ မင်းသူ့ကိုမေ့ပစ်နိုင်မှာပါ"
"အဲဒီပစ္စည်းတွေကိုတစ်နှစ်အတွင်းကျေအောင်ဆပ်ပါ့မယ်လို့ကတိပေးထားတာ၊ အဲဒီအကြွေးတွေကိုလစဉ်ဆပ်ဖို့ ငါကြိုးစားရဦးမှာ"
လူနာ ။ ။"သေချာရဲ့လားဆရာရယ်၊ဟိုတလောက ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို နမိုးနီးယားဆိုပြီးဟိုဘက်ခန်းကဆရာဝန်ကုလိုက်တာ အဲဒီလူနာကသေတော့ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့သေတာဗျ"
အဲဒီလူ နမိုးနီးယားနဲဘဲသေမှာပါ ဒါတော့စိတ်ချကိုယ်လူ"
*အမေနဲ့သမီး ရေကူးကန်မှာ ရေသွားကူးတယ်။ ရေကူးဖို့ သမီးရေကန်ထဲခုန်ချချိန်
ထောင်ထားတဲ့ဆိုင်းပုဒ်ကို အမြန်ယူပြီး ကွယ်ပေးလိုက်တယ်။
ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ "အန္တရာယ်ရှိသည်။ အနက် ၂မီတာ ကျွမ်းကျင်သူများသာ"
ဆိုတဲ့စာကြောင့် လူတွေပြုံးစိစိဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ *
*ဒါကိုအမေတွေ့တော့ ဆိုင်းပုဒ်ကို တစ်ဖက်အမြန်လှည့်လိုက်တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်နောက်မှာ
ရေးထားတာက "အမျိုးသားသီးသန့်၊ အထဲမဝင်ခင် အကျီင်္ချွတ်ပါ" ဆိုတာဖြစ်တယ်။*
* ကယောင်ကတမ်းနဲ့အမေ နောက်ဆိုင်းပုဒ်တစ်ခုယူပြီး သမီးကိုကွယ်ပေးလိုက်တယ်။
ဆိုတဲ့စာကြောင့် လူတွေ ရယ်ကျဲကျဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ *
*နောက်ဆိုင်းပုဒ်တစ်ခုကို အမေ ယူလိုက်တယ်။ အဲဒီဆိုင်းပုဒ်ကြောင့် အမေ
မူးလဲမတတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်ရေးထားတာက "မနက်၉နာရီမှ ည၁ဝနာရီထိ၊
အများသုံးနေရာဖြစ်သောကြောင့် သန့်ရှင်းမှုကို ဦးစားပေးပါ" ဆိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။
* လူတွေ ရယ်ကျဲကျဲဖြစ်ကုန်တာကြောင့် အမေ နောက်ဆိုင်းပုဒ်တစ်ခုကို
ယူလိုက်ပြန်တယ်။ ဒီဆိုင်းပုဒ်ကြောင့် အမေမူးလဲသွားတယ်။ လူတွေ
ဝါးလုံးကွဲရယ်ကြတော့တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်မှာ ရေးထားတာက "အမွေးအမျှင်များ
ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်စေရန်၊ နောက်လူများ အသုံးပြုအဆင်ပြေစေရန်၊ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း
ကျွန်မတို့ ရွှေနိုင်ငံရဲ့ တစ်ချို့ မြို့ ရွာ နာမည်တွေဟာ
အင်မတန်မှ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ နိုင်လွန်းတာပါ…ဥပမာ..
ပြွန်တန်ဆာတဲ့…နောက် ဂွေးချိုတဲ့..အဲ…ပြတိုက် ရောက်ဖူးတဲ့
အကြောင်းလေး ပြောပြချင်လို့ပါ…ရွာနာမည်က ဂွေးကြီးရွာတဲ့..
စရာ မလိုပဲ ‘ဂွေးကြီးဆရာတော်’ ရယ်လို့ နာမည်တွင်သွားတာပေါ့.
မဖြစ်ချေဘူး…ငါတော့ ဒီနာမည်ကြီး ပျောက်အောင် တစ်ခုခုတော့
စည်သွားတော့တယ်…” ကိုးတောင်ပြည့် ဂွေးကြီးဆရာတော်” တဲ့.
မဲဖောက်လှူကြတာကိုး…။ အစီအစဉ်ကြေငြာတဲ့ သူကလည်း
မြောက်ကျောင်းဆရာတော် ပဒေသာပင်၁၀၀၀ ပါဘုရား…..
” ကိုးတောင်ပြည့် ဂွေးကြီးဆရာတော် နှာဘူးပါဘုရား”
ကဲ …ကောင်းရော…ဆရာတော်လည်း စိတ်က မထိန်းနိုင်တော့ဘူး
လေ…ဘာကွ…လို့ အကျယ်ကြီး ပြန်အော်လိုက်တော့မှ ဟိုက ပြန်
Posted by shwewunyatana at 1:08 AM
မန်းမြန်မာပလာဇာလေးလွှာ၌ ရုပ်ရှင်ရုံလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်စဉ် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား - မန္တလေး မေ ၂၂ မန္တလေးမြို့ ဈေးချိုအနီး ၈၄ လမ်း၊ ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈လမ်းကြားရှိမန်းမြန်မာပလာဇာတွင် ယနေ့နံနက် ၁၁နာရီခန့်က ရုပ်ရှင်ရုံအတွက် ပြင် ဆင်မှုများအားဝရိန်ေ...